Ifulethi lisesakhiweni esisha!! - I-Airbnb
Ifulethi lisesakhiweni esisha!!
Avsallar, Antalya, i-Turkey
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Джерен
U-Джерен uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Джерен izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
IFULETHI lethu lisesakhiweni esinezingqalasizinda ezinhle, ifulethi ngokwalo linakho konke okudingekayo, linakho konke ukuhlala kwakho okunethezekile
IFULETHI lethu litholakala endaweni enengqalasizinda egcwele esebenza unyaka wonke nazo zonke izinsuku zesonto , ebusika kunendawo yokubhukuda yangaphakathi lapho izinga lokushisa kwamanzi lingu-30 -31 degrees, elinethezekile kakhulu ngisho nezingane ezincane. Futhi kule ndawo kune-hammam, i-sauna, i-shower yama-Charco, indawo yokuzivocavoca, i-billiards, i-tennis yetafula, i-cinema, indawo yokudlela endaweni eyakhiwe ngamatshe
I-Avsallar yidolobha elithokomele kakhulu elinempilo yalo evamile, cishe unyaka wonke, kunezindawo zokudlela ezinokudla kwendawo kanye nokudla komhlaba jikelele. I-Adsallar inebhishi yayo enesihlabathi! Hhayi kude nendawo eyakhiwe ngamatshe kunemakethe yamasonto onke lapho ungathenga khona inhlanzi ehlanzekile, imifino nezithelo unyaka wonke
Являюсь владельцем уютных квартир в Алании Авсалларе, предоставим Вам не забываемый отдых!!
Ngizohlangana njalo futhi ngizongena ngokwami izivakashi zami, uma kunezinkinga nemibuzo engingayixazulula ngokushesha, njengoba ngihlezi ngisendaweni Ucingo lwami luhlezi luvuliwe, futhi ngizama ukuphendula IMIBHALO NGOKUSHESHA
Izilimi: Русский, Türkçe